Vaovaon'ny Sekoly 1 Coast - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Tongasoa eto amin'ny 1Coast School News! Ity gazety ity dia ho fampahatsiahivana mahazatra ho an'ny sekoly any amin'ny morontsiraka afovoany. Azo idirana amin'ny Internet ny gazety ary mety tsara raha azonao atao ny mandefa mailaka ny rohy mankany amin'ireo mpampianatra Central Coast fantatrao.
Fanontana voalohany - fe-potoana 1 / 2
Mianara momba ny loharano ananantsika ho an'ny sekolin'ny Central Coast, ity andiany ity dia mifantoka amin'ny fampihenana ny fako sakafo any an-tsekoly miaraka amin'ny soso-kevitra hifanakalozana kilalao sy fotoana hisakafoana mba hanampiana amin'izany ary fanontaniana fanodinkodinana ny mpampianatra hitsapana ny fahalalanao sy hahazoany loka! Vaovaon'ny Sekoly 1 Coast - andiany voalohany
Fanontana faha-2 - Septambra 2021
Sarotra ny mianatra amin'ny fanakatonana! Amin'ity andiany ity dia ampahafantarinay anao ny vavahadin-tserasera fianarana an-tserasera vaovao ary manome anao loharano hafa hanampiana anao amin'ny fanabeazana ny Coastie Kids mandritra ny fanakatonana. Vaovaon'ny 1Coast School - Sept 2021
Fanontana faha-3 - Oktobra 2021
Amin'ity andiany ity dia homena loharanom-pahalalana hampiasaina mandritra ny Herinandrom-pirenena momba ny fanodinana (8-14 Novambra) ny mpampianatra, miampy toro-hevitra vitsivitsy momba ny fomba hananana Halloween. Vaovaon'ny 1Coast School – Okt 2021
Edisiona faha-4 - Novambra 2021
Herinandrom-pirenena momba ny fanodinana (8-14 Novambra) izao – fantaro ny momba ny webinars an-tserasera mba hampitomboana ny fianaranao hanampy anao hanodina bebe kokoa sy hampihenana ny fako! Ankoatr'izay dia mizara ny rohy rehetra momba ny fandaharam-pianarana ho an'ny fandaharam-pianaranay ao amin'ny Fandaharam-pianarana NSW Schools izahay. Vaovaon'ny 1Coast School – Nov 2021
Edisiona faha-5 - Desambra 2021
Aza mandany Krismasy! Amin'ity andiany ity izahay dia mizara ny toro-hevitra ambony indrindra momba ny fanodinana bebe kokoa sy ny fandaniana kely mandritra ny vanim-potoanan'ny fety. Azonao atao ihany koa ny milaza aminay ny fomba eritreretinao tokony hataonay WExpo 2022 - Hetsika fanabeazana ho an'ny Sekoly Central Coast. Vaovaon'ny 1Coast School – Des 2021
Fanontana faha-6 - Janoary 2022
Miverina any am-pianarana! Amin'ity andiany ity dia mampahatsiahy ireo mpampianatra izahay ireo fahafahana mianatra eo an-toerana izay azo ampidirina ao amin'ny drafitry ny lesona. Manana programa azo antoka ho an'ny COVID izahay izay azon'ny mpampianatra atao ao an-dakilasy tsy mila mpitsidika hanatrika ny sekoly. Vaovaon'ny 1Coast School - Jan 2022